Mutungamiri weBato reLEAD, Muzvare Masarira, Vanoenda kuConstitutional Court Kuti Mitemo yeVana Ivandudzwe
Gunyana 03, 2021
Muzvare Linda Masarira
Mutungamiriri webato rinopikisa reLabor Economists and African Democrats (Lead) Muzvare Linda Masarira nevamwe vaviri vaenda kudare reConstitutional Court nenyaya yekuti mitemo iriko inobata vana igadziriswe kuitira kuti vana vasaroorwe kana kumanikidzwa kuita zvepabonde vasati vabva zera.
Gweta revatatu ava, Amai Jacqueline Sande, vati vanoda kuti dare reConstitutional Court, iro rakatombotura mutongo wekuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere havafanirwi kuroorwa, risunde nhengo dzeParamende kuti dzigadzirise mitemo yakadai seMarriages Act neCustomary Marriages Act, inova inobvumidza kuti vana vari pasi pemakore aya vanogona kuitwa zvepabonde navo.
Muzvare Masarira vati chinangwa chavo nevamwe vavo ndechekuti mitemo yenyika ivandudzwe kuti isabvumidze kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere varoorwe kana kuwanikwa vachimanikidzwa kuita zvepabonde. Muzvare Masarira vati vanoda kuti mitemo iyi idzivirire vana kunyangwe vezvemachechi avo vanobvumirana nekuti vana vasati vabve zera vaende pabonde.
Mukuru wekomishini inoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi Amai Virginia Muwanigwa vaudza Studio 7 kuti komisheni yavo inoona sekuti kuroodzwa kwevana vasati vabve zera kana kumanikidzwa kuita bonde kunogona kugadziriswa kana mitemo inochengetedza vana yasimbiswa.
Muzvare Masarira vaenda kudare vakabatana namuzvare Precious Musarurwa pamwe naVaMunyaradzi Midzi. Danho iri rinouya mushure mukutsviriridza kwenyaya yaAnna Machaya, uyo anonzi akaroorwa ari mudiki akazoshaya ave nemakore gumi nemashanu achisununguka achibatsirwa navananyamukuta vekereke yekwaMarange kuManicaland.
Nyaya ina Rutedo Mawere